Amanyathelo abonakalayo: IiVidiyo kunye neMidiya eFunyenwe Martech Zone
Amanyathelo abonakalayo: IiVidiyo kunye neMithombo yeendaba eFumanekileyo
NgoLwesithathu, Septemba 25, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Amanyathelo abonakalayo ibonelela iiarhente kunye neempawu ezinkulu kunye nethuba lokusasaza umxholo wazo kubabukeli abafanelekileyo. Iqonga labo lifikelela ngaphezulu kwe-380 yezigidi zababukeli bevidiyo rhoqo ngenyanga. Ukuza kuthi ga ngoku, balinganise ukubukwa kwevidiyo ezi-3 trillion, ngaphezulu kwe-500 yezigidi zevidiyo, kunye nephulo lokuthengisa ividiyo elingaphezulu kwe-10,000.
Amanyathelo abonakalayo ahambisa intengiso yevidiyo esekwe ngokufanelekileyo kumntu olungileyo ngexesha elifanelekileyo kumshicileli olungileyo, enceda abathengisi bophawu ukuba balwe nokwahlulwa kwemithombo yeendaba ngelixa besebenzela ukubonwa okufumanekileyo.
Amanyathelo abonakalayo Ngokwenyani wenze i-metric ezinokuthi zenziwe ezamkelweyo liBhunga eliJongayo leMidiya, iqela loshishino eliphicothayo kunye nokuvuma iinkonzo zemilinganiselo yemidiya:
Ukufikelela kwinyani ™: Imetric yokuqala yokusebenza kwe-MRC eyamkelweyo kwimithombo yeendaba ehlawulweyo, eyeyakho kunye neyokufumana.
Isabelo soKhetho ™I-metric yokuqala yohlobo lwayo ukulinganisa ukusebenza kwegama lophawu kwividiyo esekwe kukhetho.
Ukuzibandakanya kwiVidiyo: Imilinganiselo yokusebenza ebonisa indlela abantu abasebenzisana ngayo nomxholo wevidiyo.
Amanyathelo abonakalayo iphatha imikhankaso yevidiyo uninzi lwabathengisi abanempembelelo emhlabeni, njenge-P & G, iFord, iMicrosoft, kunye ne-Unilever, kunye neearhente zemithombo yeendaba ezinje ngeStarcom MediaVest, iMindshare, kunye neOmnicom, Amanyathelo aBonakalayo abambe isikhundla esisodwa kumzi mveliso wevidiyo.
tags: eendaba ezuziweyoIiVidiyo zeNtengisoisabelo sokhethoukufikelela ngokwenyanizevidiyouhlalutyo lwevidiyoukuhanjiswa kwevidiyoukuzibandakanya kwevidiyoamanyathelo abonakalayo
ReachEdge ukunceda amashishini aseKhaya afumane abaThengi abaninzi
UGuubie: Iplatifomu yokuThengisa nge-imeyile engama- $ 59 ngonyaka